ERider JOB! 2000W – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
JOB! 2000W လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအားဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောဘယ်လ်ဂျီယံကုမ္ပဏီထံမှလျှပ်စစ်ကုန်တင် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးကားများနှင့်သေးငယ်တဲ့ကုန်တင်ကားအပါအဝင်က e-ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့ပေးထားပါတယ်။
JOB! 2000 ဝပ်နှင့် 5000 ဝပ်: နှစ်ခုမော်တာ options များနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
JOB! 2000W 50 km / h ၏ကန့်သတ်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက် 2,000 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 80 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးများအတွက် 20 ဩလီသီယမ် NMC ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန်3မှ5နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter မဆိုအရောင်ရရှိနိုင်သည်နှင့်တိကျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။